Print Page - Waa maxay Herpes Simplex?
Diseases and Conditions => Cudurrada Caruurta => Topic started by: SomaliDoc on April 22, 2008, 08:01:16 PM
Title: Waa maxay Herpes Simplex?
Post by: SomaliDoc on April 22, 2008, 08:01:16 PM
Herpes simplex waa infakshan ka dhasha fayraska wuxuuna keenaa caabuq iyo biya gala meella mucayina oo maqaarka ka mid ah. Infakshanka asaasiga ah oo u horreeya wuxuu ku dhacaa carruurta. Badanaa infakshanka iska socdaa wuxuu dib ugu soo noqnoqdaa sanadaha soo socda wuxuuna leeyahay barar guduudnaan iyo meella biya-galaan, badanaana waxaa lagu arkaa bushinta iyo afka agagaarkiisa.
Infakshanka asaasiga ah waxaa laga yaabaa inaan la garan. Badanaa wuxuu noqon karaa mid aad u daran kaas oo keenaya xannuun afka ah oo siyaada ah iyo qanjirada surka oo weynaada. Carruurta canbaarta qabta infakshanka herpes simplex oo canbaar la socoto wuxuu ku samayn karaa meella badan oo biya galeen marka canbaartu la socoto waana in dhakhtar si degdeg ah u arkaa.
Infakshanka soo noqda oo guud, ama "cold sores", waxaa laga yaabaa inuu keenay xumad, u furnaanta qoraxda ama dabayl, ama marmarka qaarkood cadaadis. Wuxuu ku bilawdaa xanxanto qaniinyo la socoto, gubniin uu la socdo caabuq (guduud uu la socdo beerbal iyo kaffee), dabadeedna biya gala. Tani waxay dhacdaa 24-48 saacadood waxayna qaadataa 4-5 berri si lagu dhamaystiro. Infakshanka bakteeriyada ka dhalatay "cold sore" ayaa dhici karta.
Herpes-ku si sahlan ayey dadka qaba cold sores-ku ku gudbin karaan waana in laga fogaadaa in jirku is taabto sida shuminta.
Isticmaalida difaaca qoraxda, sida dharka, koofiyad iyo iskiriinka qoraxda, ayaa muhiim ah in lagaga hortago weerar soo noqnoqda ee cold sores oo wajiga ku dhaca.
Daawada fayrasku looma isticmaalo badanaa infakshanka herpes simples-ka asaasiga ah. Carruurta waa in la siiyaa biya badan iyo cunta khafiifa haddii uu jiro in afku caabuq (nabar jira) yeesho. Haddii meelaha biyuhu galeen ama dilaacay xannuun hayo xumadina jirto, baanadol khafiifa oo xannuunka biíya ayaa lagama maarmaana.
Waxaa jira kareema badan loo helli karo cold sores-ka. Si kasta ha ahaatee, dawa ma leh. Nasiib wanaag, jiradu waxay dhacdaa waqti aan badnayn waxayna noqotaa wax sahlan isla maalmahaasba.
Dawa mucayina oo fayraska farmashiyaha ayaa laga gataa waana in la isticmaalaa saacadaha ugu horreeya si loo khafiifiyo waxyeellida cold soreska.
Dawada wax lagu dhaqo ama kareemka waa in la bilaabaa si looga hortago infakshanka bakteeriyada uu keenay cold sores-ku.
Wixii macluumaad intaas ka badan halkaan ka weydii